रूस र विदेश हाल को वर्ष थप र अधिक लोकप्रिय होम्योपैथिक उपचार दुवै। यो के हो? तिनीहरूले कसरी गर्न सक्छन्? तिनीहरूले परम्परागत औषधीको कसरी फरक? यी सबै मुद्दाहरू पक्कै मान्छे कुनै पनि रोग देखि पीडित रुचि राख्नुहुन्छ। तिनीहरू हाम्रो लेख जवाफ प्रयास गर्नेछ।
Homeopathy आधारभूत सिद्धान्तहरू
Homeopathy प्रयोग गरेर मान्छे कहिलेकाहीं phytotherapy यसलाई भ्रममा। तर लेट 18 औं शताब्दीमा उपचार को वर्णन विधि को आधार, यसको संस्थापक शमूएल Hahnemann यो पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कथन मानिन्छ थियो। उदाहरणका लागि, ठूलो खुराक मा कुनैन जस्तै यस्तो पदार्थ मलेरिया मा ज्वरो एक मानव-जस्तो लक्षण गराउँछ भने कि, छ, यसको सानो खुराक रोग विरुद्ध मदत गर्नेछ।
साथै, यो होम्योपैथिक औषधीको कुरा, थाहा महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि मिलीग्राम मा मापन छैन जो सामाग्री सुरु यस्तो एउटा सानो रकम थियो। Homeopathy मा "कता हो कता सानो मात्रा।" भन्न
यो आवश्यक पदार्थ बारम्बार पानी मा पतला र तेजी हल्लाइन्छ लागि (dynamized)। यस्तो प्रक्रिया पनि यसको संरचना पानी "सम्झना" भनेर वास्तवमा, ऊर्जा क्षमता तिर जान्छ, तर यो नै एउटा infinitesimal रकममा समाधान मा उपस्थित छ। केही अवस्थामा, दबाइ कि यो बारेमा जानकारी "सम्झना" सुरु सामाग्री को अणु को अडियो उत्पादन, तर मात्र पानी समावेश हुन सक्छ।
उहाँलाई लागि लागूपदार्थ सिर्जना गर्न प्रत्येक रोगी गर्न व्यक्तिगत दृष्टिकोण - Homeopathy अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था। यो कि Homeopathy व्यवहार रोग, र रोगी छैन विश्वास छ।
के यो के हो, होम्योपैथिक उपचार बनाउँछ?
होम्योपैथिक छन् कि उपकरण, पारंपरिक दबाइहरु विपरीत, विशिष्ट स्कोप छैन। तिनीहरूले सारा शरीर कार्य किनभने उदाहरण, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने, analgesic वा bacteriostatic लागि, श्रेय गर्न सकिन्छ।
आफ्नो प्रयोगका खनिज, तरकारी वा पशु मूल को मात्र प्राकृतिक पदार्थ को लागि कच्चा माल रूपमा। सायद सबैभन्दा प्रभावशाली जरा, stems, पात, फूल वा फल बिरुवाहरु को एक किसिम ले गरे होम्योपैथिक उपचार को सूची हो। तर ठूलो चासो र ती जो प्रयोग पशु विष - साँप, मौरीले पनि spiders।
होम्योपैथिक उपचार को मुख्य प्लस - यो मानव शरीर को लागि आफ्नो पूर्ण सुरक्षा र साइड इफेक्ट, परम्परागत चिकित्सा को Bane छन् जो को अभाव छ। साथै, तिनीहरूले शरीर habituation कारण गर्छन् र, त्यसैले, बारम्बार receptions संग नै तीव्रता संग कार्य गर्नेछ।
होम्योपैथिक औषधि कसरी लिन
होम्योपैथिक एजेन्ट घटेको, समाधान, मलहम को रूप मा उत्पादन, तर अक्सर तिनीहरूले granules को रूप मा हो - कहिले काँही sucrose को वाहेक, गर्भवती प्राथमिक उपचारात्मक एजेन्ट संग, lactose बनेको सानो बल। जब प्रयोगको केही नियमहरू पालन गर्नुपर्छ:
छैन छर्रे हात लिएर लायक - यो एक चम्चा मा जार सामग्रीहरू खन्याउन र त्यसपछि आफ्नो मुखमा पठाउन राम्रो छ;
होम्योपैथिक एजेन्ट प्रयोग स्वादिष्ट टूथपेस्ट वा मुख धुने सास freshener पछि लाग्न छैन - यी अवस्थामा यो 30 मिनेट पर्खनुहोस् आवश्यक छ;
दुई लागूऔषधको नियुक्ति एकै समयमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन - तिनीहरूलाई बीच कम्तिमा एक घण्टा अन्तराल के;
आफ्नो मुख मा भंग गर्न अनुमति - निल्छ वा यसलाई चपाउनु गर्छन्;
भोजन अघि आधा घण्टा वा एक घण्टा यसलाई पछि लागि यो गर्न;
उपयोग गर्नु भन्दा पहिले शेक खस्छ।
तीव्र रोग प्रवाह मा होम्योपैथिक उपचार हरेक आधा घण्टा वा घण्टा लिएको (आधारमा स्वास्थ्य स्थिति मा)। इच्छित परिणाम हासिल भएपछि लिइरहेको दबाइ रोकियो। यो प्रसंगवश, परम्परागत औषधीको देखि एक मौलिक भिन्नता हुन समग्र स्वास्थ्य सुधार भएको छ भने पनि दर guzzle, छ। खैर, अधिक-लिनुभएको लागि होम्योपैथिक उपाय यसलाई द्वारा सम्बोधन छन् भनेर नै लक्षण प्रयोग भएको थियो हुन सक्छ।
तपाईं होम्योपैथिक उपचार कसरी भण्डारण गर्छन्
होम्योपैथिक लागूपदार्थ गर्मी र प्रत्यक्ष घामको ड्राई सुरक्षित भण्डारण छन्। कृपया याद गर्नुहोस् कि तिनीहरूलाई अर्को बलियो-गन्ध पदार्थ थिएन कि। यी उपकरण तिनीहरूले विदेशी odors र उच्च आर्द्रता को उपस्थिति देखि deteriorate जहाँ एक फ्रिज, राख्न छैन।
होम्योपैथिक उपचार विद्युत क्षेत्रहरु subjected गर्न आवश्यक छैन - त्यो छ, तिनीहरूले टाढा टीवी र कम्प्युटर बाट राख्नुपर्छ। यात्रा गर्दा, तिनीहरूले चुम्बकीय निरीक्षण वा एक्स-रे डिटेक्टरों पास छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
सबै भन्दा लोकप्रिय होम्योपैथिक उपचार
घरेलू Homeopathy सबै रकम दुई मुख्य समूह विभाजित छन्: monocomponent र जटिल। सोही, तिनीहरूलाई को पहिलो मात्र योग्य homeopath नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर, त्यो रोग को प्रकृति र बिरामीको व्यक्तित्व को विशेषताहरु द्वारा repelled छ। यसले विशेष औषधि पसल बनेको छ र यो धेरै खर्च हुनेछ, दबाइ एक व्यक्ति आवेदन छ हो।
जटिल होम्योपैथिक तयारी तिनीहरूले एक निर्धारण आवश्यक छैन र नियमित औषधि पसल बिक्रि गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले अक्सर प्रयोग गरिन्छ परम्परागत चिकित्सा। सबैभन्दा तिनीहरूलाई लोकप्रिय खोकी उपचार हो, "Belladonna" - समयमा सुक्खा खोकी लागि - ड्राई स्पास्टिक खोकी र "aconite" संग सर्दी। र एक चिसो मा: खस्छ "Allium सल्फर" (तरल अलग) र "Dulcamara" (नाक भीड लागि)। Hypertensive एक छर्रे "Aconitum" प्राप्त सकारात्मक प्रभाव उल्लेख गरे।
होम्योपैथिक उपचार "Hel" (एडी)
रूसी होम्योपैथिक उपचार मा 20 वर्ष यो क्षेत्रमा एक नेता छ जो दृढ "Hel", बेचिन्छ र धेरै विरामीहरु यसको औषधीय तयारी प्राप्त सकारात्मक अनुभव छ। रूस मा कुल यस कम्पनी को जटिल स्रोतहरूको 60 भन्दा बढी प्रकार, औषधि पसल को नेटवर्क मार्फत बेचिन्छ छन्।
होम्योपैथिक तयारी granules को रूप मा र समाधान को रूप मा यो उत्पादित, को सिर्जनागर्दै रोगहरु को एक विस्तृत श्रृंखला समेट्छ। उदाहरणका लागि, जब व्यापक प्रयोग इन्फ्लूएंजा र catarrhal संक्रमण को खतरा "Abropernol» (Abropernol), विभिन्न मूल को ब्रोंकाइटिस, र लहरे खोकी राम्रो उपचार दबाइहरु "Drosera-Homaccord» (Drosera-Homaccord) र "Dulcamara-Homaccord» (Dulcamara-Homaccord), र osteochondrosis मा जोडहरुको को रोगहरु र मेरुदण्ड इंजेक्शन प्रयोग स्नायविक प्रक्रियाहरू "Diskus kompozitum ampoules।"
sedatives होम्योपैथिक तयारी प्राप्त गुण
अलग होम्योपैथिक हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ sedatives। परम्परागत को पृष्ठभूमि विरुद्ध तिनीहरू sedatives यसलाई लत छैन देखि, स्पष्ट लाभ छ र कुनै साइड इफेक्ट छ। Homeopath यसरी, पहिले नै उल्लेख रूपमा, यो बिरामीको अवस्था र व्यक्तित्व, एक वा दुई उपकरण assigning को विशेषताहरु आधारित छ।
यी अवस्थाहरूमा, प्राथमिकता आदि, "Hepar सल्फर", "तांबा", "Valerian", "Ignacy", "Kalium bromatum", "Bryony" monotherapy दिइएको छ
तर यी एजेन्ट को उत्कृष्ट tolerability बावजुद, तिनीहरूलाई केही छैन बच्चाहरु दिइएको हुनुपर्छ, कि उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, वयस्कहरूको लागि मात्र granules लागू "AVENA पीसी", "शान्त" र रूस मा उत्पादन "Nevrosed"। एक घरेलू "साना मानिस" ड्रग्स र "Bebised" राम्रो दिन6वर्ष मुनिका बच्चाहरु।
तर "Valerianahel" (जर्मनी) को एक थोपा, साथै Kiddies जीवनको दोस्रो वर्ष देखि पाठ्यक्रम, एक डाक्टर को सिफारिस मा मदत र रूसी हालतमा "Passionflower EDAS-11" पनि नवजात शिशुहरु लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर,।
गर्छ Homeopathy अन्य उपचार संग संयुक्त
तपाईं होम्योपैथिक औषधि लिएर सुरु गर्नु अघि, उपचार को यो विधि परम्परागत चिकित्सा लागि वैकल्पिक छैन र यो संग प्रतिस्पर्धा प्रवेश गर्दैन थाहा हुनुपर्छ। यो Homeopathy अवलोकन र उपचार प्रक्रिया चिकित्सक, neurologists, cardiologists, आदि को लागि एक बाधा हुन सक्दैन भन्ने हो यसबाहेक, यी व्यवसायीक अक्सर, होम्योपैथिक उपचार को मद्दत गर्न Resort, सूचीमा तिनीहरूलाई सहित pharmacological साथ।
सम्झना, होम्योपैथिक औषधि लिएर, यो पहिले नै नियुक्त पारंपरिक दबाइहरु वा प्रक्रिया को उन्मूलनको आवश्यकता छैन कि उपकरण हो। तपाईं पालन गर्नुपर्छ भनेर मात्र अवस्था - परम्परागत र होम्योपैथिक उपचार को खुराक बीच अन्तराल। एक होम्योपैथिक - सुरुमा, रासायनिक लागूपदार्थ त्यसपछि, दुई घण्टा पछि लाग्न र।
केही थप सुझावहरू अन्तिम
होम्योपैथिक औषधि (तिनीहरूलाई केही लेखमा दिइएको छ को नाम) रोगी स्वास्थ्य को अकाट्य मद्दत छ, तर एक उचित र उचित प्रयोग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
कि क्षयरोग को खुला फारम, सम्झना venereal रोगहरु र ओन्कोलजी होम्योपैथिक उपचार उपचार छैन। र रोग को थप तीव्र र गम्भीर manifestations, अधिक चाँडै पुरानो अवस्था र समय धेरै निको पार्न आवश्यक लागि होम्योपैथिक उपाय गर्न मद्दत गर्नेछ।
साथै, साथै परम्परागत चिकित्सा मा नै एक्लै दबाइ निर्धारित छैन! एक विशेषज्ञ देखि एक निदान संग एक होम्योपैथिक फार्मेसी जानुहोस्। Homeopathy एक व्यक्ति तपाईं एक नुस्खा लिखित छैन भने छ, स्पष्ट निर्देशनहरू निम्न, जटिल लागूपदार्थ प्रयोग गर्नुहोस्। स्वस्थ रहन!
दबाइ 'काफेजोलिन'। कसरी बृद्धि गर्नुहुन्छ?
दबाइ "Subalin": निर्देशन बच्चाहरु समीक्षा लागि
तयारी "Epigenes" (स्प्रे)। समीक्षा, अध्ययनहरू
कुकुर खाना "व्युत्पत्ति": संरचना, समीक्षा
Mendeleev गरेको आवधिक तालिका र आवधिक व्यवस्था
फ्रान्सेली रिवेरा: यो कहाँ छ?
Ashtanga Vinyasa योग: विवरण, शैली को विशेषताहरु
निकायको म्यानुअल तनाव - परिभाषा र सूत्र, ठोस गुणहरू